By vijayafm on	 March 16, 2020 देश, फोटो फिचर, राजनीति, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
डोलराज रानाभाट, ३ चैत्र । नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचेतक एवम सांसद मणिभद्र शर्माले उत्तर कोरीयाको जस्तो शासन ल्याउन सत्तारुढ दललाई चुनौति दिनुभएको छ । संघीयताको अभ्यास र मर्मलाई स्थापित गर्न आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएपनि दुई वर्षसम्म धेरै असहज परिस्थितीमा समेत जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट गर्दै सहयोग गरेको भएपनि पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध पारेको प्रष्ट पार्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकै कारण गत बुधवारदेखि गण्डकी प्रदेश सभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ । प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेको हो ।
सांसद शर्माले दुई वर्ष अगाडी सचिवालय सम्वन्धन तथा व्यवस्थापन गर्न वनेको विद्येयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको र त्यसको संशोधनका लागि दिएको सुझाव अस्विकार गर्दै सरकारले वहुमतको दम्भ देखाउन लागेका कारण बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेको बताउनुभयो । अनौपचारिक अनौपचारिक भेटहरुमा मुख्यमन्त्री र सभामुखले विद्येयक सच्चाउने आश्वासन दिएर यतिका समय लम्ब्याउनु भएको र अहिले एकाएक वहुमत देखाउन थालेपछि वाध्य भएर वैठक अवरुद्ध पारेको उहाँको भनाई थियो । विद्येयकमा राजनीतिक आडमा नियुक्त गरिने सचिवलाई अथाहा अधिकार दिएपछि त्यसैको संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग आफूहरुको रहेको शर्माले बताउनुभयो । विद्येयकमा राजनीतिक नियुक्ती हुने सचिवलाई अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको र उसैले सदस्य सचिव समेत तोक्न पाउने व्यवस्थाको सुधार हुनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षको जोड छ ।
शर्माले भन्नुभयो,“ प्रशासनिक काम सचिवलाइई जिम्मा दिऔँ । नीति निर्माण बनाउने जिम्मा राजनीतिक पार्टीका प्रत्येक प्रतिनिधि राखेर गरौँ । सदस्य सचिवको जिम्मा चाहिँ राजनीतिक नियुक्तीका सचिवलाई दिउँ । सभामुखको अध्यक्षतामा दलीय हैसियत अनुसार प्रतिनिधित्व गराऔँ भन्ने हाम्रो माग हो ।” प्रमुख प्रतिपक्ष दलपनि सभाको प्रमुख अंग भएको र वहमुतले पेल्न थाल्ने हो भने उत्तर कोरीयाको जस्तो शासन ल्याए हुन्छ शर्माले भन्नुभयो ।
हुवहु विद्येयक पास भए संसदीय मर्यादा, पद्धती सवैलाई नोक्सान गर्ने र त्यो रोक्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल कत्तिपनि नचुक्ने उहाँको भनाई छ । पेलेर चलाउन खोजे त्यही अनुसारको प्रतिकार गर्ने उहाँको भनाई छ । शर्माले भन्नुभयो,“आफू अनुकुल नभई प्रदेशको हित अनुकुन निर्णय हुन पर्र्यो ।” किन उहाँहरुलाई पेलेरै तागतनै देखाएर विद्येयक पास गर्नुपर्छ भन्नेमा आउनुभयो आफरुहरु आश्यर्चमा परेको शर्माले बताउनुभयो ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा नेकपाको एकलौटी
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेशमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई २ करोडका दरले विनियोजित भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वनाइएको कार्यविधिमा योजनामा सहमति नभए मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शर्माका अनुसार अहिले जहाँ नेपाली काँग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र नेकपाका समानुपातिक सांसद छन् त्यहाँ बजेट वरावर सहित दुवै जनाको योजनालाई महत्व दिइएको छ भने जहाँ केकपाका प्रत्यक्ष र काँग्रेसका समानुपातिक सांसद छन् त्यहाँ नेकपालाई ७० प्रतिशत हावी हुने गरी मुख्य मन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो । यसको पनि विरोधमा वैठक अवरुद्ध भएको हो । शर्माले भन्नुभयो,“ वरावरी त परको कुरा समझदारी समेत गर्न चाहानुभएन ।” यो समानता र न्यायको सिद्धान्त विपरित भयो भन्ने हाम्रो भनाई हो शर्माले भन्नुभयो ।
विश्वव्यापी कोरोनाको संक्रमण हुन नदिन गर्नुपर्ने पूर्व तयारी र योजनाहरुमाथि छलफल गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकार एकलौटी विद्येयक पास गर्ने खेलमा हराएको शर्माको आरोप छ । कोरोनाको इस्यू नै ल्याउदैन सरकार शर्माले भन्नुभयो, नत्र संसद अवरुद्ध हुँदैन । राष्ट्रिय विषयमा जनहितको विषयमा हामी सचेत छौँ । सरकार दुइ चार भाषण चुट्नमा व्यस्त भएको तर कोरोना हो की होइन भन्ने जाच गर्ने संरचना बनाउने तयारी नगरेको, स्रोत र साधनको व्यवस्थामा छलफल हुनुपर्नेमा भएको छैन । जुन विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने त्यसमा सरकार गम्भीर छैन जहाँ स्वार्थ छ त्यहाँ मरिमेटेर लागी परेको छ ।
सच्याएर नगएसँग समाधान नहुने शर्माले बताउनुभयो । “की हामीले उठाएका माग वारे कन्भिन्स हुनुपर्यो कि उहाँहरुले गलत विषय उठाउनुभयो भनि प्रमाणित गर्नुपर्र्यो ।”
यता सत्तारुढ दलका सांसदहरुले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल सरकारप्रति पूर्वाग्रही राखेर काँग्रेसले गैरजिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाएका छन् । सदन अवरुद्ध गर्नुको कुनै कारण र तुक नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
लगातार जस्तै गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध पार्नुको कारण के हो ? काँग्रेसको स्वार्थ के छ यसमा ? कुराकानी गर्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आइरहेको नेपाली काँग्रेस पार्टी गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचेतक एवम सांसद मणिभद्र शर्मा
Posted by 101.6 Vijaya FM on Sunday, 15 March 2020